Shirkii Baarlamaanada IGAD oo Suudaan ku soo geba geboobey | BanaadirTimes.com
Shirkii Baarlamaanada IGAD oo Suudaan ku soo geba geboobey
Magaalada Khartuum ee xarunta Dalka Suudaan lagu soo gebagebeeyey shir socday muddo sedax maalmood ah,kaasi oo ay isugu imaadeen Guddoonada Baarlamaanadda ku mideesan Urur Goboleedka IGAD iyadoo Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Mahad Cabdalla Cawad shirkaasi ka sheegay in Dowladda Soomaaliya ay bixineyso dhamaan kaalmooyinka looga baahdo .
Shirkan socday mudo sadax maalmood ah ayaa waxaa diirada lagu saarayay sidii iskaashi buuxa oo wada shaqeyn ah u dhexmari lahaaa dhamaan Baarlamaanadda Geeska Afrika ee ku mideysan Urur Goboleedka IGAD si wada jirna looga hortago arrimaha Abaaraha, Tahriibka, Macluusha , iyo Isbadalka Cimiladda,waxaana goob joog ahaa Guddoomiyaha Baarlmaanka Dalka Suudaan oo marti galinayay Shirka.
Mahad Cabdalla Cawad Guddoommiye ku xigeenka Labaad ee Golaha Shacabka Soomaaliya oo shirkaasi markuu soo idlaaday ka dib la hadlay Warbaahinta Qaranka ayaa sheegay in qodobo wax ku ool ah ka soo baxeen shirkan loogana fadhiyo Dal walba in Baarlamaankiisa horgeeyo dhamaan waxyaabihii lagu heshiiyay si ay u meel maraan qodobadaasi.
Sidoo kale Gudoommiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Fedraalka Soomaaliya Mahad Cabdalla Cawad ayaa tibaaxay in Gudoomiyaha Goloha Shacabka ee Dowladda aan Walaalaha nahay ee Jabuuti Maxamed Cali iyo wafdi uu hogaaminayo dhawaan imaan doonaan Magaalada Muqdisho Bisha November kana jeedindoono khudbad taariikhi ah.
Horey waxaa Soomaaliya u yimid guddoomiyihii baarlamaanka Jabuuti Alla u naxriistee Idiris Arna ‘Uud Cali oo ahaa guddoomiyihii Baarlamaanka Jabuuti oo geeriyooday.